MOETHIHAAUNG: ရေဒီယို၊ ရေဒါ အဆက် အသွယ်ပြတ်ပြီး တဲ့နောက်၊ မိုင်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်၊ ငါးနာရီေ ကျာ်၊ ဆက်ပြီးပျံသန်းခဲ့တဲ့ ဂြိုလ်တုသို့ အချက်ပေးချက်များ တွေ့ရှိ..
ရေဒီယို၊ ရေဒါ အဆက် အသွယ်ပြတ်ပြီး တဲ့နောက်၊ မိုင်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်၊ ငါးနာရီေ ကျာ်၊ ဆက်ပြီးပျံသန်းခဲ့တဲ့ ဂြိုလ်တုသို့ အချက်ပေးချက်များ တွေ့ရှိ..
14 March 2014 Last updated at 14:24 ET BBC World News
ကပ္ပလီပင်လယ်ကို ဗဟိုပြု၍၊ အမေရိကန်ရေတပ် နှင့် အိန္ဒိယရေတပ်တို့သည် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာအရှေ့ဘက်ခြမ်းရေပြင်တွင်၊ ကွာလာလမ်ပူမှ ဘေဂျင်းသို့ ပျံသန်းရင်း စုစုေ ပါင်း လူပေါင်း၂၃၉ ဦးနှင့်အတူ ပျောက်ဆုံးနေသော မလေးရှားလေကြောင်း ခရီးစဉ် အမှတ် MH370 ဘိုးအင်း ၇၃၇-၂၀၀ ဂျမ်ဘိုဂျက်လေယာဉ်ကြီးကို ဘီးစိပ်တိုက် ရှာဖွေနေကြသည်။
အိန္ဒိယရေတပ်သည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်း အိန္ဒိယအရှေ့ဘက် Chennai ကမ်းရိုးတန်း၏ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင် ကို အထူးပြု ရှာဖွေနေသည်။
ခရီးစဉ်အမှတ် MH370 ဘိုးအင်း ၇၃၇-၂၀၀ ဂျမ်ဘိုဂျက်လေယာဉ်ကြီး ဆီမှ ရေဒါနှင့် ရဒီယိုအဆက် အသွယ်များ ပြတ်တောက် သွားပြီးနောက်၊ ငါးနာရီကျော် ဆက်ပြီးပျံ သန်းနေခြင်း အချက်ပေးမှုများကို၊ လန်ဒန်မြို့အခြေစိုက် Inmarsat ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီကြီး၏ ဂြိုလ်တုမှ ဖမ်းယူရရှိခဲ့သည်ဟု BBC သတင်းဌာနက သတင်းရရှိသည်။
အစောပိုင်းကလည်း အမေရိကန်သတင်းဌာနများသည် အမည်မဖေါ်လိုသည့်အမေရိ ကန်အရာရှိများထံမှ၊ ခရီးစဉ်အမှတ် MH370 ဘိုးအင်း ၇၃၇-၂၀၀ ဂျမ်ဘိုဂျက်လေ ယာဉ်ကြီးဆီမှ ရေဒါနှင့် ရဒီယိုအဆက်အသွယ်များ ပြတ်တောက်သွားပြီးနောက်၊ နော က်ထပ်နာရီအနည်းငယ် ဆက်လက်ပျံသန်းခြင်း အချက်ပေး မှုကို ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးမှ ရရှိခဲ့သည့်သတင်းများကို ဖေါ်ပြခဲ့ကြ သည်။
အမေရိကန်သမ္မတအိမ်ဖြူတော် အတွင်းဝန်ချုပ် Jay Carney သည်၊ သတင်းအချက်အ လက် အသစ် များကြောင့် အမေရိကန်ရေတပ်မှ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့ ၀င်ရောက် ရှာဖွေနေခြင်းကို အတည်ပြုခဲ့သော် လည်း အသေးစိတ်ကို ပြောကြားခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
သတင်းအချက်အ လက်အသစ် များနှင့်ပတ်သက်ပြီး မလေးရှား အာဏာပိုင်များမှ မှတ်ချက်ပေးခြင်း မရှိပေ။
အမေရိကန်ရေတပ်သည် ဖျက်သင်္ဘော USS Kidd နှင့် ခေတ်မှီထောက်လှမ်းရေး ကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည့် လေယာဉ်တစ်စီးတို့ကို အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်း သို့ စေလွှတ်ထားပြီး ခရီးစဉ်အမှတ် MH370 ဘိုးအင်း ၇၃၇-၂၀၀ ဂျမ်ဘိုဂျက်လေ ယာဉ်ကြီးကို ရှာဖွေနေသည်။
မလေးရှားအစိုးရ၏ မေတ္တာရပ်ခံမှုဖြင့် အိန္ဒိယ၏ ရေတပ် လေတပ်နှင့် ကမ်းခြေစောင့် တပ်တို့မှ မလေးရှားလေယာဉ်ကြီးကို ရှာဖွေလျှက်ရှိသည်။
အိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်းရေတပ် စခန်းဌာနချုပ် India's Eastern Naval Command သည်၊ Chennai ကမ်းရိုးတန်း၏ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် စတုရန်းရေမိုင် ၃၅၀၀ ရှိရေပြင်အတွင်း ရှာဖွေနေသည်ဟု မလေးရှားအစိုးရက ပြောသည်။
အိန္ဒိယရေတပ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ DK Sharma ကလည်း၊ ရေတပ်စစ်ရေ ယာဉ် ခြောက်စီး၊ လေတပ်စစ်လေယာဉ် ငါးစီးတို့သည် ကပ္ပလီပင်လယ်ကို ဗဟိုပြု၍ မလေးရှားလေယာဉ်ကြီးကို ရှာဖွေနေသည်ဟု ဆိုသည်။
Source: BBC World Asia News
This would mean the jet could have flown more than 1,600km (1,000 miles) beyond its last confirmed position.
The Indian navy has also been asked to search an area in the Bay of Bengal off India's Chennai coast, Malaysian authorities said on Friday.
Earlier, US media outlets also quoted unnamed officials as saying that the Boeing 777 was "pinging" satellites for hours after its last contact with air traffic controllers.
White House spokesman Jay Carney has confirmed that US teams were shifting their focus to the Indian Ocean because of "new information", but gave no further details.
The US - one ofanumber of countries helping to search for the plane - has sentanavy destroyer andasophisticated surveillance aircraft to the Indian Ocean.
Malaysian authorities later said that India's Eastern Naval Command was to search an area of sea 9,000 sq km (3,500 sq miles) off the Chennai coast.
The BBC's Jonathan Head in Kuala Lumpur says the latest claims are being taken seriously by the US.
Feng Zhiliang, whose cousin Feng Dong, 21, wasapassenger, told the BBC in Beijing that families had spent the past week "in agony and desperation".
"It's beenatime of extreme emotions, real ups and downs. We are very disappointed with the response of the Malaysian authorities. The information they give out is completely contradictory."
He added: "Until it's clear what happened we still have hope that our families will return home safely."
Malaysia's acting transport minister Hishammuddin Hussein said that the search area was expanding both east and west of the Malaysian peninsula.
He said he was aware of the claims about satellite data, but he would not comment unless the information had been "corroborated by the relevant authorities".
The official Xinhua news agency said experts and officials had met on Friday and "analysed new information", but did not give details.
Mr Hussein later said the images were not connected to flight MH370's disappearance.
* Credit to Thaw Nyain
Posted by Myo Lwin Aung at 5:36 PM